အကောင်းဆုံးလွမ်းဆွတ် Turntables 2017 - ဝယ်သူရဲ့လမ်းညွှန် - တရုတ် 10TURNTABLES
> အကောင်းဆုံးလွမ်းဆွတ် Turntables 2017 - ဝယ်သူရဲ့လမ်းညွှန်
လွမ်းဆွတ် Turntables Specification နှိုင်းယှဉ်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် Turntable မြန်နှုန်း လင်ပန်း စီဒီဖွင့်စက် Am / FM ရေဒီယို buttons
Electrohome Wellington စံချိန်တင်ကစားသမား (EANOS502)3မြန်နှုန်းကစား ပလပ်စတစ် √ √ check စျေး
Electrohome ထိုးမြဲလက်မှတ်ဗီနိုင်းစံချိန်တင် Player ကိုဂန္ထဝင် Turntable (EANOS700)3မြန်နှုန်းကစား ပလပ်စတစ် √ √ check စျေး
Vicrola လွမ်းဆွတ်ဂန္ထဝင် Wood က 6-in-1 ဘလူးတုသ် Turntable3မြန်နှုန်းကစား ပလပ်စတစ် √ √ check စျေး
Crosley CR704C-PA ဆိုပြီးဂီတပညာရှင် Turntable3မြန်နှုန်းကစား ပလပ်စတစ် √ √ check စျေး
Vicrola လွမ်းဆွတ် Aviation Wood က 7-In-1 ဘလူးတုသ် Turntable Entertainment ကစင်တာ, မဟော်ဂနီ3မြန်နှုန်းကစား ပလပ်စတစ် √ √ check စျေး
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းဒစ်ဂျစ်တယ် GDI-TW3USB 7-In-1 စတီရီယို Entertainment ကစင်တာ, Paprika3မြန်နှုန်းကစား ပလပ်စတစ် √ √ check စျေး
JPyle PTCD54UB Bluetooth ကိုစပျစ်သီး Classic Style ကို Turntable နာယကစနစ်3မြန်နှုန်းကစား ပလပ်စတစ် √ √ check စျေး
Sylvania SRCD838 လွမ်းဆွတ် Turntable3မြန်နှုန်းကစား ပလပ်စတစ် √ √ check စျေး
Pyle Vintage ဗီနိုင်း Turntable စတီရီယိုစနစ် (PTCD64UBT)	3မြန်နှုန်းကစား ပလပ်စတစ် √ √ check စျေး
Pyle Vintage ဗီနိုင်း Turntable စတီရီယိုစနစ် (PTCD64UBT)3မြန်နှုန်းကစား ပလပ်စတစ် √ √ check စျေး
Electrohome Wellington စံချိန်တင်ကစားသမား (EANOS502) • 01
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း: MDF (အလတ်စားသိပ်သည်းဆ fiberboard)
စံချိန်မြန်နှုန်း: 33, 45, 78
နာယက Size: 2x 5W (3 ") 8 Ohms
frequency Range (FM ရေ): 88-108 MHz
Power Consumption: 19 watts က
Size ကို (W x ကို: D x ကို H ကို): 19,29 "x 12.6" x 9.1 "
လက်မှတ်: FCC သည်, ICES, ETL / CETL
အဆိုပါ Electrohome Wellington စံချိန်တင် Player ကိုသင်သည်သင်၏အားလုံးအချိန်အကြိုက်ဆုံးစကားကိုနားထောငျဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့စစ်မှန်41 မှာ retro turntable ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ 100 ကျော်အနှစ်အားဖြင့် inpired ခဲ့လောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့သစ်သားနဲ့ Analog အသံစနစ်များနှင့်အတူ၎င်း၏ပွတ်ကြလော့။ ဤမှတ်တမ်းသည်ကစားသမားလေး / FM ရေဒီယို, CD ကိုရဲ့နှင့်သင်တန်းတစ်ခုဗီနိုင်းကစားသမားများကဲ့သို့အများအပြားသည် Modes ပါဝင်ပါသည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည် Modes သာတစ်ဦး illuminated tuning ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကထိန်းချုပ်ထားရသည်။ တကယ်တော့သင်ကသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်နှင့်ဗီနိုင်းပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်သည့်အခါဂီတကစားရန်တတ်နိုင်ကြသည်; ယခုပြုလုပ်မယ့်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
စံချိန်တင်ကစားသမားလောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့သစ်သားအတွက်ပူးတွဲဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကကြောင့်အသံအရည်အသွေး enriches နှငျ့သငျရနိုငျအကောင်းဆုံးအသံကစွမ်းဆောင်ရည်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးပါသည်။ သငျသညျပုဂ္ဂလိကနားထောင်လိုပါက, သင်သည်သင်၏နားကြပ်အတွက် plug ခွင့်ပြုထားတဲ့ port တစ်ခုရှိသေး၏။ သို့သော်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍပေမယ့်ဆေးထိုးအပ်အဖြစ်ကောင်းစွာအသုံးပြုခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မဟုတ်ရုံသစ်သား, တကနီလာတစ်ဦးထက်ပိုနွေးနှင့်သဘာ Vibe များအတွက်အသံအရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းကြွေဆေးထိုးအပ်တင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤမှတ်တမ်းကစားသမားရဲ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတစ်ခုမှာသင်ကကစားသမားကိုယ်တိုင်ကအတွက်က USB port ကိုမှတဆင့်သင့်ဖုန်းပေါ်တွင်သင်၏အလွန်ကိုယ်ပိုင်ဗီနိုင်းမှတ်တမ်းတင်နိုငျသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ မလိုအပ်ပါကွန်ပျူတာရုံသင့်ရဲ့ USB နဲ့စံချိန်အတွက် plug ။ ဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ရိုးရှင်းပြီးအသုံးပြုသူဖော်ရွေပါတယ်။ သာ $ 149,99 မှာစျေးနှုန်းကခိုးယူကျိန်းသေပါပဲ။ ယေဘုယျအားအဆိုပါ Wellington စံချိန်တင်ကစားသမားထူးခြားသောဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲ USB port ကိုတစ်ဦးထံမှအယ်လ်ဘမ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့။
Electrohome ထိုးမြဲလက်မှတ်ဗီနိုင်းစံချိန်တင် Player ကိုဂန္ထဝင် Turntable (EANOS700) • 02
Finish ကို: ရီးရဲလ် Wood က Veneer
USB မှမှတ်တမ်းတင်: ဟုတ်ကဲ့
3.5mm အရန် Input: ဟုတ်ကဲ့
နာယက Size: 2x 5W 8 Ohms (2.6 ") 2x15W 8 Ohms (3.6")
ပါဝါစ Adapter ကို Input: 120V - 60 Hz
ပါဝါစ Adapter ကို Output: 11V 1,100mA
Size ကို (W x ကို: D x ကို H ကို): 17.9 "x 13.5" x 12.1 "
ခေတ်သစ်နည်းပညာများ၏အနည်းငယ်ထိတွေ့နဲ့ဂန္စတိုင် turntable ရှာဖွေနေပါသလား ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အမော်ဒယ်ဖြစ်သကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်ရှာဖွေပါ။ ဤသည် turntable သဘာဝကသစ်သားထဲက လုပ်. AM / FM ရေ, CD, USB နဲ့ MP3 ကိုအတူ HI-Fi စတီရီယိုစနစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet များအတွက်ဗီနိုင်း-to-MP3 ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် aux input ကို, ဒီအမှန်တကယ်အနေနဲ့အားလုံး rounder turntable ဖြစ်ပါတယ်။
Electrohome 100 ကျော်နှစ်ပေါင်းအသံထုတ်ကုန်အောင်ထားပြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကအွန်၌တည်နေကြခြင်းနှင့်တစ်ချိန်က "ရေဒီယို၏အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson" အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။ $ 199,95 ၏စျေးနှုန်းသည်ကြိုးမဲ့ဂီတကို streaming များအတွက်ဘလူးတုသ် In-တည်ဆောက်ခဲ့သည်ကြောင့်သင့်အကြိုက်ဆုံး Bluetooth ကိရိယာများ (စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, Laptop, ကွန်ပျူတာများ, etc) ၏အားလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ MP3 ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဗီနိုင်းကိုသင် headphone jack input ကိုကနေတဆင့်ဒီဂျစ်တယ်အသံဖိုင်တွေကိုသို့သင့်ရဲ့ဗီနိုင်းမှတ်တမ်းများကိုဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာ AM / FM ရေဒီယိုအဘို့အ display ကို dial နှင့်အပြည့်အဝအကွာအဝေးစတီရီယိုစပီရှိပါတယ်။ သင်လိုအပ်အင်္ဂါရပ်အားလုံးဤပုံစံအထဲမှာထုပ်ပိုးထားသည်။
တစ်ဦးအလွန်ချောမွေ့ပြောင်လက်စပျစ်သီးကိုဒီဇိုင်းနှင့်အတူကကျိန်းသေသင့်ရဲ့ခေတ်ဟောင်း၏သငျသညျကိုသတိပေးတယ်။ တစ်ဦးလွမ်းဆွတ် Vibe ချွတ်ပေးခြင်း, သင်ပြန် 60 ရောက်နေထင်ချင်ပါတယ်။ ဒီ turntable အကြောင်းကိုကိုချစ်ဖို့ဘာမဟုတ်လား တဦးတည်းအလေးအနက်ထားသင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက် $ 100- $ 200 အတွင်းပါလျှင်ဒီ turntable ရတဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
03 • Vicrola လွမ်းဆွတ်ဂန္ထဝင် Wood က 6-in-1 ဘလူးတုသ် Turntable
Functions များ: CD Player, Cassette Player ကို, Built-in speakers
output အမျိုးအစား: နာယက
ပါဝင်သည်: AC Power Adapter ကို
x က 18 လက်မ W က
အလေးချိန်: 14,9 ပေါင်
အာမခံဖော်ပြချက်: 1 နှစ်လီမိတက်ထုတ်လုပ်သူအာမခံ
Store ကို Item နံပါတ် (DPCI): 008-03-0400
သငျသညျအစဉျအမွဲသင့်အိမ်တက် Vibe တစ်ကယ့်ကိုဟောင်းစပျစ်သီးကိုရှာဖွေနေ turntable ကစားသမားရှိသည်ဖို့လိုခငျြသလား? ကောင်းပြီဒီ model ကအားလုံးကိုရှိပါတယ်။ အံ့သြဖွယ်လွမ်းဆွတ်ပျစ်သီးတစ်စိတ်ကူးစင်ကြယ်သောအသံနှင့်တလျှောက်ကြည့်ရှုသည်။ ဆန်းသစ်သောနည်းပညာအားဖြင့်တစ်ဦးကမော်ဒယ်, ဒီသုံးမြန်နှုန်း turntable (33 1/3, 45, 78 RPM) သင်အကြိုက်ဆုံးဗီနိုင်းမှတ်တမ်းများနှင့်အယ်လ်ဘမ်များအပေါငျးတို့သပါဝင်သည်။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းသောသာ $ 79,99 မှာစျေးနှုန်းကြောင့်ကြိုးမဲ့သင့်ရဲ့ဘလူးတုသ် enabled devices များအနေဖြင့်သင့်ရဲ့ဂီတကစားရန် built-in ကဘလူးတုသ်နှင့်တကွကြွလာ; အဘယ်သူမျှမကြိုးလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးသင့်ရဲ့အဆင်ပြေဘို့, ဒီတစ်ကယ့်ကိုအကောင်း turntable ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစ built-in ဖြစ်ပါတယ် CD Player, Cassette Player နဲ့ FM ရေဒီယို။ တစ်ဦးက cable ကိုမဆို Non-ဘလူးတုသ် device များအတွက်ပေါက်အတွက် 3.5mm aux များအတွက်ပါဝင်သည်။ သင်တို့အဘို့ကိုပိုအဘယ်အရာကိုတောင်းနိုင်သလဲ ဒါဟာအစတစ်ခု RCA aux-In နှင့် headphone jack ရှိပါတယ်။
ဒီ model များအတွက်ရောင်းချခြင်းအချက်များင်း၏ Bluetooth ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုက၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အညိုရောင်အတွက် coated, အဲဒါကိုတစ်စိတ်ကူး turntable ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့လူနေမှုခန်းမတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသော Deco ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျတစျဦးကျောက်ခဲနှင့်ငှက်နှစ်ကောင် hit ချင်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုစျေးနှုန်းအဘို့အထွက်ရပ် Built-in စတီရီယိုစပီကာဖြစ်ကြသည်။
ဒါကြောင့်အသစ်ကမှတ်တမ်းများမှကြွလာသောအခါ၎င်းသည်နည်းနည်း skips ။
04 • Crosley CR704C-PA ဆိုပြီးဂီတပညာရှင် Turntable
Functions များ: CD Player, Cassette Player ကို
Power ကရင်းမြစ်: Plug-in ကိုလျှပ်စစ် Powered
ပါဝင်သည်: / b> AC Power Adapter ကို, အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ်
x က 17 လက်မ W က
အလေးချိန်: 17 ပေါင်
မူလကကီအမေရိကန်နိုင်ငံကနေ Crosley တစ်ခု entry ကိုအဆငျ့ turntable ဝယ်ဖို့ရှာဖွေနေ audiophiles များအတွက်ကောင်းစွာထူထောင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးဘတ်ဂျက်ပေါ်မှာဆိုရင်ပေမယ့်အရည်အသွေးကောင်းတစ်ခုမော်ဒယ်ရှိသည်ဖို့လိုပါလျှင်, ဒီမော်ဒယ်ဈေးကွက်ထဲမှာနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းပျစ်သီး turntable တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ model ကယ့်ကိုစပျစ်သီးကိုကြည့်ရှုနိုင်ပေမဲ့, နည်းပညာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
$ 104,99 မှာ, သင်သည်ဤပုံစံပေါ်တွင်သင်၏လက်၌ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်3အမြန်နှုန်း (33 1/3, 45 နှင့် 78 RPM) ကစားမယ့်ခါးပတ်မောင်းနှင် turntable ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစတစ်ဦးသည် Programmable 20-လမ်းကြောင်းမှတ်ဉာဏ်ရှိပြီးဘေးထွက်တပ်ဆင်ထားကက်ဆက်ကုန်းပတ်နှင့်အတူကြွလာတော်မူသောတစ်ဦးကို CD player ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခရီးဆောင်အသံအဆင်သင့်ဖြစ်သကဲ့သို့ရိုးရှင်းစွာအသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် MP3 ပလေယာအတွက် plug ။ ဒါဟာ AM / FM ရေဒီယိုအဖြစ်ကောင်းစွာလေယာဉ်ပျံ tuning ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြင့်ကြွလာပါတယ်။ ပယ်လျှင်ထိပ်, ကပြောင်းလဲနေသောအပြည့်အဝအကွာအဝေးစတီရီယိုစပီရှိပါတယ်။
အဆိုပါဒီဇိုင်းကိုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပြီးအညိုရောင်အတွက် coated ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ model ၏တစ်ခုတည်းသောကျဘက်ကိုက headphone jack ရှိသည်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ သို့သော်အခြား features တွေရဲ့အသံအရည်အသွေးကတက်သည်စေသည်။ ယေဘုယျအား, ဒီတစ်စိတ်ကူး turntable သည်နှင့်သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်အတွင်းဖွင့်လျှင်, နှစ်ကြိမ်မစဉ်းစားကြဘူး။
05 • Vicrola လွမ်းဆွတ် Aviation Wood က 7-In-1 ဘလူးတုသ် Turntable Entertainment ကစင်တာ, မဟော်ဂနီ
Functions များ: Built-in speakers, CD Player, CD ကို Recorder, Am / FM ရေဒီယို
output အမျိုးအစား: နာယက, 3.5mm Jack
ပါဝင်သည်: Remote Control ကို, AC Power Adapter ကို
x က 21 လက်မ W က
အလေးချိန်: တောင်ဆိုရင် 25.2 ပေါင်
$ 154,99 မှာစျေးနှုန်း, ဒီဆန်းသစ်သောနည်းပညာမှအခြားအကြီးအမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအကြီးအစျေးနှုန်းရှိသည်ပါဘူးဒါပေမယ့်လည်းအံ့သြဖွယ်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဒီဇိုင်းကိုတစ်ကယ့်ကိုကောင်းတဲ့စစ်မှန် retro Vibe ချွတ်ပေးသည်နှင့်အညိုရောင်အတွက် coated ဖြစ်ပါတယ်ပါပဲ။ သငျသညျစပျစ်သီးကိုအမှုအရာသို့ရောက်နေလျှင်ဤသည်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းလိမ့်မယ်။
ဒါဟာသင်အကြိုက်ဆုံးဗီနိုင်းမှတ်တမ်းများနှင့်အယ်လ်ဘမ်များအပေါငျးတို့သကစားမယ့်သုံးမြန်နှုန်း turntable (33 1/3, 45, 78 RPM) ဖြစ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကို၎င်း၏အစစ်အမှန်သစ်သားဆောက်လုပ်ရေးဇိမ်ခံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ built-in ဖြစ်ပါတယ် Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့လိုအပ်မည်သည့်ကြိုးမရှိဘဲသင်၏ဘလူးတုသ် enabled devices များအနေဖြင့်ဂီတကစားရန်။ ဒါ့အပြင်သူကအလွယ်တကူမယ့် CD ကိုမှဗီနိုင်းများနှင့်သွင်းထားတဲ့တိပ်ခွေ directy ထံမှသင်အကြိုက်ဆုံးဂီတအပေါငျးတို့သမှတ်တမ်းတင်; အဘယ်သူမျှမကကွန်ပျူတာလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဤသည်ကိုလည်းဟောင်းခေတ် rotary tuner နဲ့ built-in CD ကိုကစားသမား, ကက်ဆက်ကစားသမားများနှင့် AM / FM ရေဒီယိုရှိပြီးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနှင့်စတီရီယိုစပီကာလည်းပါဝင်သည်အဖြစ်အားလုံး turntable ဝိုင်းလျက်ရှိ၏ အံ့သြဖွယ်တစ်ခုကိုသည်မဟုတ်လော တစ်ဦးက cable ကိုမဆို Non-ဘလူးတုသ်စက်ကိရိယာနှင့် ii များအတွက် aux input ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ခု RCA aux-In နှင့် headphone jack ရှိပါတယ်များအတွက်ပါဝင်သည်။ နိဂုံးချုပ်မှာတော့ဒီသည်၎င်း၏ခြီးမှမျးပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့သင့်ဆန်ခါတင်စာရင်းများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်ပါတယ်။
CD ကို function ကိုတိုးတက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
06 •ဂရေ့ဒစ်ဂျစ်တယ် GDI-TW3USB 7-In-1 စတီရီယို Entertainment ကစင်တာ, Paprika
တိကျတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး features တခြား features:
CD ကိုများနှင့်ဂီတ Player: ဟုတ်ကဲ့
CD ကိုမှတ်တမ်းတင်: ဟုတ်ကဲ့
RoHS ကိုက်ညီ: အဘယ်သူမျှမ
ထုပ်ပိုးအမျိုးအစား: Retail Box ကို
အာမခံ: 90 နေ့, Retailအထုပ်အတိုင်းအတာ: Height: 24 "Length: 17" Width: 16 "Weight: 27 ပေါင်,
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းဒစ်ဂျစ်တယ် San Diego မှ, အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက်ရဲ့အသံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးကကောင်းစွာထူထောင်အသံကုမ္ပဏီသေးကောင်းစွာလေးစား။ သင်ဤမော်ဒယ်၏စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်အံ့သြနေလျှင်, ဤစပျစ်သီးကိုစံချိန်တင်ကစားသမား $ 143,73 မှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်စံချိန်တင်ကစားသမား, ကက်ဆက်ကစားသမား, CD ကိုကစားသမားများနှင့် AM / FM ရေစတီရီယိုနှင့်တကွကြွလာမယ့် retro turntable ဖြစ်၏ အားလုံးသင်၏ audio လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့သူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့။ ၎င်း၏မြန်နှုန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြောင့် 33, 45 နဲ့ 78 RPM မှတ်တမ်းများကစားကအလိုအလျောက်သေံလက်မောင်းရှိပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုတကယ်အံ့သြဖွယ်င်ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကနားထောင်ခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်သောသူတို့အဘို့အ headphone jack built-in အတူလက်ရာမြောက်သောစတီရီယိုသံကိုကယ်တင်တတ်၏နှစ်ခု Full-range ကိုစပီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး RCA လိုင်း output ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ခု option ကိုအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ PC မှာသို့မဟုတ်ရဲ့ MAC မှမှတ်တမ်းတင်ထည့်သွင်းသောက USB port ကို built-in များနှင့် Audacity အသံတည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပြီးအဖြစ်ကောင်းစွာလွယ်ကူသည်။
၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြောင့်အဟောင်းစပျစ်သီးကိုခံစားပေးမယ့် paprika သစ်သားစတိုင်ကက်ဘိနက်ပါပဲ။ သင်ကဒီပုံစံအရပျသငျ့ပါလျှင်, သင်သည်မည်သည့်နောက်ထပ်မမေးသင့်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်းဆိုနေတာနေလျှင်။ ဒါဟာမယုံနိုင်စရာဖွင့်နိုင်အောင်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေပဲ! ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာ disc ကိုမျှမျှတတအမြန်လောင်ကျွမ်း။ ယေဘုယျအား, ဒီမော်ဒယ်ထိပ်တန်းထစ်သည်နှင့်သင့်ရဲ့ဆန္ဒစာရင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သင့်တယ်။
အသုံးပြုသူဖော်ရွေအစီအစဉ်နှင့်မျှမျှတတအမြန်တဲ့ disc ကိုတောက်၏။
07 • Pyle PTCD54UB Bluetooth ကိုစပျစ်သီး Classic Style ကို Turntable နာယကစနစ်
အလေးချိန်: 22 ပေါင်
ယူနစ်အရွယ်အစား: 20,08 "x 13,39" x ကို 8,86 "
အရောင်: အညိုရောင်သစ်သား (မေပယ်ဘက်စ)
Pyle အားဖြင့်အံ့သြဖွယ်မော်ဒယ်, ဒီ 6-in-1 ရဲ့တစ်ဦးဂန္စတိုင် turntable ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖန်စီဘာမျှမယ့်သော်လည်းအလွန်အမင်းစွယ်စုံဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်အလုပ်မ။ ဒါဟာသင်တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်နားထောင်အတွေ့အကြုံကိုပေးလိမ့်မည်ဟုစပျစ်သီးကို turntable ပါပဲ။
ဒါဟာ built-in Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့ဂီတလွှဘို့နှင့်တကွကြွလာတစ်ခုအံ့သြဖွယ်ခေတ်မီနည်းပညာရှိပါတယ်။ ထိုသို့သောစသည်တို့ကိုအိုင်ဖုန်း, Android စမတ်ဖုန်း, iPad Tablet များ, အဖြစ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Bluetooth ကိရိယာများအပေါငျးတို့သဒီမော်ဒယ်တစ်ဦး built-in CD ကိုကစားသမား, အပေါက်-in ကိုကက်ဆက်ကုန်းပတ်, အပြည့်အဝအကွာအဝေးစတီရီယိုစပီကာများနှင့် AM / FM ရေရှိပါတယ်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အလုပ်ဖြစ်တယ် သင့်ရဲ့အာရုံကိုဖမ်းရန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု display နဲ့အတူရေဒီယို။ MP3, အသံသွင်းဖို့ဗီနိုင်း, သင်တစ်ဦး headphone jack input ကိုနဲ့အတူဒစ်ဂျစ်တယ်အသံဖိုင်တွေကိုသို့သင့်ရဲ့မှတ်တမ်းများကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ MP3 ကိုပြန်ဖွင့်ဘို့တစ်က USB Flash ကို Drive ကို Reader ကိုရှိပါတယ်။ အဆင်ပြေကြောင့်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
ဒါကြောင့်ဒီဇိုင်းင်သည်သစ်သားကက်ဘိနက်ရှိပြီးဒါဟာအမှန်တကယ်လွမ်းဆွတ်ခံစားချက်ချွတ်ပေးသည်။ ရွှေအနည်းငယ်ထိတွေ့နှင့်အတူအညိုရောင်အတွက် coated, ဒီမော်ဒယ်သင့်အိမ်အတွက်ကောင်းသောကြည့်ဖို့ခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏သစ်သားအမှုအပေါ်၎င်း၏အနုပညာလက်ရာများအဘယ်သူအားမျှမှဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်? ဒါဟာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကမော်ဒယ် $ 129,99 မှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
CD များထုတ်လုပ်ရန်ကွန်ပျူတာများရန်ဗီနိုင်းစံချိန်ကနေ download လုပ်ပါစေနိုင်တယ်။
Sylvania SRCD838 လွမ်းဆွတ် Turntable • 08
မြန်နှုန်းက Settings: 45RPM, 33.3RPM, 78RPM
အင်္ဂါရပ်များ: Built-in speakers, လိုင်း-in ကိုဂျက်, Am / FM ရေဒီယို, CD ကို Recorder
Drive ကိုအမျိုးအစား: ခါးပတ် Drive ကို
width: ထဲမှာ 15,0
အမြင့်: ခုနှစ်တွင် 11.5
နက်ရှိုင်း: ထဲမှာ 11,0
Sylvania အားဖြင့်ဤပုံစံကိုအခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကယ့်ကိုအထူးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကအရမ်းနိမ့်စျေးသေးအများအပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိပါတယ်ကြောင်းတစ် turntable ရှာနေလြှငျ, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အ turntable ဖြစ်ပါတယ်။
Sylvania အားဖြင့်ဤပုံစံသည်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုအမီလိုက်နိုင်ရန်အရည်အသွေးမြင့်မားပီနှင့်အတူ 5-In-1 turntable ဖြစ်ပါတယ်။ သာ $ 64,62 မှာစျေးနှုန်း, သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်အကြိုက်ဆုံးမှတ်တမ်းများ, CD, တိပ်ခွေ Cassette နှင့်လေထုရေဒီယို station ကျော်ကစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစမဆိုအသံစက်ပစ္စည်းချိတ်ဆက်ရန်တစ်ခု aux-input ကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာလက်ရာမြောက်သောနှင့်တကယ်ချောမွေ့ပြောင်လက်ကြောင်းကိုကွီးကွပျမှူးဂန္ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြစ်သောတစ်ကြော့လွမ်းဆွတ်သစ်သား finish ကိုရှိပါတယ်။
ဒါဟာနည်းနည်း skips ပေမယ့်ဒါဟာအသစ်ကဗီနိုင်းမှကြွလာသောအခါ, ကအံ့သြဖွယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်ကကြီးမြတ်စျေးနှုန်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာထူးကဲများနှင့်ခရမ်းရောင်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူတကယ်အထူးလှပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက် $ 100 အောက်လျှင်ဒီကသင်၏လိုချင်သောစာရင်းအပေါ်ဖြစ်သင့်သည်။
09 • Pyle Vintage ဗီနိုင်း Turntable စတီရီယိုစနစ် (PTCD64UBT)
Turntable မြန်နှုန်း ပြင်ဆင်မှုအား: 33-1 /3rpm ပါ, 45 rpm ပါ, 78 rpm ပါ
dimensions: x ကို 13.2 19.4 x ကို 9.2 လက်မ
အာမခံ: 1 နှစ်ထုတ်လုပ်သူ
Pyle မှအခြားမော်ဒယ်, ဒီဘလူးတုသ် $ 149,99 များ၏စျေးနှုန်းကို CD, USB, USB မှတ် Recorder နှင့်အတူ SD ကတ် Player ကိုအားလုံးနှင့်သဟဇာတမယ့်တစ်ဦး turntable စတီရီယိုစနစ်ဖြစ်သည်။ သင်ဘတ်ဂျက်ရှိပါကသင်တစ်ဦးနှလုံးခုန်၌ဤပုံစံအရသင့်ပါတယ်။
အညိုရောင်အတွက်အရောင်, ဒီဂန္စတိုင် turntable ကြီးမြတ်ခေတ်မီနည်းပညာရှိပြီးအားလုံးသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘလူးတုသ် devices များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ MP3 ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဗီနိုင်းလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဒါဟာဖုန်းခေါ်ဆိုမှု display ကိုနှင့်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် AM / FM ရေဒီယိုဆွဲရန်အပြည့်အဝအကွာအဝေးစတီရီယိုစပီကာနှင့်တကွကြွလာ။ တစ်ဦး aux input ကိုကိုလည်းနောက်ဘက် panel ကိုမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်အရာကိုဒီ model အကြောင်းကိုတကယ်အံ့သြဖွယ်င်ကကောင်းစွာတကယ်ဆက်သွယ်အဖြစ်ကဘလူးတုသ် function ကိုဖွင့်သည်။
ဤပုံစံအားလုံးတဦးတည်းအတွက်ခေတ်မီနည်းပညာနှင့်အတူဂန္ကစားစတိုင်ပေါင်းစပ်။ ဒါဟာသစ်သားကက်ဘိနက်ပြီးခြွင်းချက်နှင့်အပေါ်အံ့သြဖွယ်အနုပညာလက်ရာများရှိပါတယ်ပါပဲ။ ရုံးသို့မဟုတ် home နှစ်ခုလုံးအတွက်သင့်လျော်သော, တကယ်သင်ဘတ်ဂျက်ရှိပါကဒီ model ရရန်အကြောင်းပြချက်မရှိ။ ယေဘုယျအား, ဒီမော်ဒယ်ကယ့်စျေးနှုန်း မှလွဲ. မဆိုးဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးအိတ်ဆောင်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ Turntables 2017-ဘူ ...